Isu Takatamisa Mahosi ... Ungangoda Iwewo | Martech Zone
Ini ndichave akatendeseka kuti ndakasuruvara zvisingaite izvozvi. Rini rakagadzirirwa WordPress kupinda ndakarova musika uye dzimwe shamwari dzangu dzakatanga kambani yavo, ini ndaisakwanisa kunge ndakafara. Sesangano, ini ndanga ndaneta nekumhanyisa nyaya mushure mekubuditswa nemawebhu webhu avo vaizopa chero dambudziko neWordPress kwatiri. NeManagedhi eWordPress yekutambira, yedu inomiririra yakatsigira WordPress, yakaigadziridza kuti ikurumidze, uye yaive nezvimiro zvakanangana nekugadzirisa ese edu masaiti uye edu ese vatengi vedu.
Isu takakurumidza kusaina sevanobatana uye takaita mazana emakambani kusaina, achitipa imwe yakanaka yemubatanidzwa mari. Musoro wedu wemusoro sesangano wainge waenda - isu takazopedzisira tave nerutsigiro rwe24 / 7 kune vedu vatengi uye kumwe kugadzirira kukuru nemabhero ese uye muridzo. Izvo zvakange zviripo kusvika mwedzi kana kupfuura yapfuura. Wedu muenzi akagamuchirwa pane seti yemaseva panzvimbo yedata yaive pasi peinoshamisa akateedzana ekuparadza DDoS kurwisa. Masayiti edu uye edu ese evatengi saiti anga ari kumusoro uye pasi miniti yega yega kana zvakadaro ne, zvinoita kunge pasina magumo saiti.
Taive takabatirira asi ini ndanga ndatanga kusvotwa nekushaiwa kwekutaurirana. Vatengi vedu vese vaitirova, uye isu hatina kukwanisa kuvaudza chero chinhu nekuti yedu yekutambira haina kutiudza chero chinhu. Ini ndakazopedzisira ndataura nemumwe wevaridzi mukati meWordPress boka reboka paFacebook uye akati ivo vaive nemaoko-ese padhiketi uye vaishanda kuti vabate vatengi vanobatwa kubva pamaseva akanangwa. Wee… izvo zvaive zvakanaka kunzwa uye ini ndiri vaviri ndakamutenda nebasa rake uye ndakatarisira kutama.
Ndokunge, kusvika tazotama.
Kana yedu saiti yango fambiswa, yakakwenya kumira. Ini ndaive nematambudziko ekupinda mukati, kurodha, kana kunyatsoita chero chinhu nenzvimbo. Vashanyi vangu vakanyunyuta uye vanokambaira kubva kune vechitatu-mapato vakaratidza saiti yacho padyo nekumira-kwakamira. Google Search Console yakaratidza dambudziko rakajeka.
Ndakaisa uyu mufananidzo uye ndokumbira rutsigiro tarisa kuseva yangu yezvinhu, ndichivaudza kuti ndanga ndichangotama. Uye ipapo mhosva yemutambo yakatanga.
Ini handisi kugadzira izvi… vakandipfuudza kubva ku tech kuenda kune tech uyo anongoramba achizviisa pamapapu ekuyedza kutsvaga matambudziko pane yangu saiti. Ivo havasi kana kuyedza kufunga kuti kana iri yavo hupfumi. Saka, ini ndakaita izvo chero geek yaizoita. Ndakamira kutsikisa ndikagadzirisa dambudziko roga roga sezvavaivanongedzera… uye mashandiro enzvimbo haana kumbochinja. Zvichida vakatoverenga chinyorwa changu pa zvinhu zvinokanganisa yako saiti kumhanya.
Hezvino izvo zvavakandiendesa kuburikidza nazvo:
A PHP kukanganisa iine yakasarudzika plugin paakagadzira API kudana. Ini ndakaremadza iyo plugin, hapana shanduko mukumhanyisa saiti.
Chikumbiro chinotevera chaindibvunza kwandakaona saiti ichinonoka. Saka ndakavanongedzera ku Dhata rekutsvaira reGoogle Webmaster uye vakati izvo hazvina kubatsira. Kwete duh… Ndiri kutanga kutsamwa zvishoma.
Ivo vakabva vataura kuti ini ndakanga ndisina chitupa cheSSS pane yangu Zvekutanga Dhirivhari Network. Iyi yaive nyaya nyowani, ini handina kana kumboziva kuti CDN yaive yakaremara (pre uye post kutama). Saka ndakaisa SSL chiiti uye vakaigonesa. Hapana shanduko mukumhanyisa saiti.
Vakandikurudzira kuti ndibatanidze JS uye CSS zvikumbiro. Zvekare, uku kwaive kumisikidzwa kwakafanana pamberi pekutama asi ini ndakati zvakanaka uye ndaisa a JS uye CSS optimizer plugin. Hapana shanduko mukumhanyisa saiti.
Vakati ndinofanira dzvanya mifananidzo. Asi, hongu, havana kunetseka nekuona kuti ini ndakanga ndatove kumanikidza mifananidzo.
Ipapo ini ndakawana meseji yekuti ivo vakaedza saiti yangu pane ese maseva uye zvaive mhosva yangu. Kutaura chokwadi, "Neruzivo urwu, isu tinokwanisa kuona kuti harisi iro dura kana mutoro wevhavha uri kukonzeresa saiti kutakura nguva." Saka ikozvino ini ndangonyepa uye ndiro dambudziko rangu… ndinorangarira mazuva aya ndisati ndashanda nekambani yaifanirwa kuve nyanzvi paWordPress.
Ndakavabvunza kuti vandiudze zvekuyedza zvinotevera. Vakandikurudzira hire a developer (Ini handisi kutamba), izvo zvinoshanda pamusoro wenyaya, plugin, uye optimization yedhatabhesi. Nekudaro, iyo WordPress nyanzvi pane ino inomiririra haigone kundiudza izvo zvakashata, asi vanoda kuti ini ndihaye zviwanikwa kunyangwe ini ndiri kubhadhara 2 kusvika katatu nguva iyo avhareji yekutambira kambani inobhadharisa.
Iyo saiti yaive ichiramba ichiwedzera kuwedzera, ikozvino ichigadzira 500 zvikanganiso apo ini ndiri kuyedza kuita zvakapusa zvinhu mukati meWordPress 'manejimendi. Ini ndinotaura zvikanganiso mazana mashanu. Chinhu chinotevera chandinoziva, saiti yangu yaenda, yakatsiviwa neakajeka theme neese plugins akaremara. Ikozvino ini ndinotanga kushandisa ese maCAPS uye mamaki ekudaidzira mumhinduro dzangu. Saiti yangu haisi yekuvaraidza, ibhizimusi… saka kuitora pasi kwaisave sarudzo.
Chekupedzisira, ndinowana runhare kubva kune mumwe munhu mukati mekambani inogamuchira uye tinotaurirana kwenguva yakareba pamusoro penyaya. Apa ndipo pandinoputika… iye anobvuma izvozvo vatengi vakati wandei vanga vaine nyaya dzekuita kubvira kuvadzinga kubva kure neDDoS yakarwiswa maseva. Chaizvoizvo? Ndingadai ndisina kufungidzira.
Kudzokera kumatambudziko… ndinoudzwa kuti ndingangoda kuedza kuenda kune nekukurumidza DNS. Imwe kubaya murima sezvo ini ndatogarwa nemheni nekukurumidza yakagadzirirwa DNS mupiki.
Yakazara chiuno ... tadzokera ku achipomera plugins. Iwo mamwe plugins anga achishanda pamberi pekutama. Panguva ino ini ndakanyatsoita. Ini ndakaburitsa zvimwe zvikumbiro kune vamwe WordPress nyanzvi uye vanonongedza kwandiri Flywheel.
Ndinobatana ne Flywheel vanondinyorera kuti ndiwane mahara bvunzo account, chinja nzvimbo yacho kwandiri, uye iri kumusoro uye inomhanya nekumhanya nekukurumidza. Uye, kumwe kuora moyo, kuri kuzviita chikamu chemutengo weizvo zvandaibhadhara neakare host yedu.
Nei Ndakasarudza Kutama?
Kufambisa nzvimbo dzese dzemasaiti hakusi kuzonakidza. Ini handina kuita sarudzo iyi nekuda kwenyaya dzekuita, ndakazviita nekuda kwenyaya dzekuvimba. Kambani yangu yekupedzisira yekundibata yakandirasa nekuti vakashaiwa huchokwadi (uye vachiri kushaya huchokwadi) kubvuma kuti ivo vane zvimwe zvakakura zvekuita nyaya. Ndingadai ndakavashivirira vachindiudza chokwadi uye nekupa tarisiro pavachagadziriswa zvinhu, asi handina kukwanisa kuvashivirira vachingonongedza minwe.
Heano mushumo weWebmaster mazuva mashoma gare gare:
Unogona kushamisika kuti chii chingaitika kana Flywheel inokura… ichaguma nechiitiko chakafanana here? Chimwe chezvinhu zvandakaziva mukufamba uku ndechekuti yedu yekare yekugamuchira yakanga isina kugona kuita kuti iite mashandiro eakaundi imwe pamusoro peimwe. Nekuda kweizvozvo, dambudziko rinogona kunge risiri iro rekuisa zvangu zvachose, anogona kunge ari mumwe munhu anokwenenzvera zviwanikwa pane server ichitiunzira tese pasi.
Nesaiti zvakachengeteka pa Flywheel, tiri kuisa zvitupa zvedu zvekuchengetedza uye kudzosa chikara kuhupenyu. Ndinokumbira ruregerero nekushaikwa kwemukati vhiki rapfuura. Unogona kubheja kuti tichave tichigadzirira imwe yakarasika nguva!
Kuzivisa: Isu tave mubatanidzwa weFlywheel! Uye Flywheel zvanga zva inokurudzirwa neWordPress!
Tags: kubhururukavakakwanisa wordpress hostingWordPresswordpress hostingwpengine
Kukadzi 1, 2016 na7: 09 PM
Ini ndinonzwa kunge ndanga ndichive nenyaya dzakafanana nevamwe vesaiti yangu inomiririra futi. Kushamisika kana ivo vari kubvisa-kutsvagisa yavo yakachengetedzwa yeWordPress kubata kune mamwe maseva anga achiwana iyo DDoS kurwisa? Zvakafanana ruoko-kure uye mhosva mutambo kusvika pakupedzisira vawana tekinoroji iyo yaiti ivo vaona mamwe emukati maseva nyaya ivo vaaishanda pairi. Usatenda kuti ndanga ndine nyaya kubva ipapo nerombo rakanaka.
Kukadzi 1, 2016 na8: 03 PM
Ini ndinofunga kudiwa kwakakwira kune aya mapuratifomu akakwanisa. Nehurombo, sekuziva kwaunoita ini newe… kune vanhu vakawanda kunze uko vano “funga kuti vanoziva” maringe nekuziva chaizvo zviri kuitika nezvikuva izvi. Ini ndinotenda kuti vanozobata uye voshandisa masystem ekuongorora ayo anozokwanisa kutsvaga nyaya. Kutendeseka, chiitiko ichi chakaonekwa sekuti vaingokanda mapfumo kumadziro. Ndakarasa chivimbo chose.
Kukadzi 1, 2016 na8: 35 PM
Ndinonzwa kurwadziwa kwako. Hapana chakaipisisa kupfuura kufamba nemimwe nzira isina basa yakanyorerwa gadziriso yedambudziko iwe uchitoziva kuti haisi kuzobatsira.
Ndiyo here imwe inomiririra uko IonThree inoitirwa? Uye isu tinofanira kufunga nezvekufamba? Ndinofunga takangomutsidzira.
Zvakare, ndingadai ndakatarisira kuti iwe udanidzire kambani zita nemazita sezvo uine vatengi vakagamuchirwa pavari uye, seni, vanogona kunge vari kushamisika kana vaine nyaya dzavasingazive nezvadzo parizvino. Izvo zviri kunze kwekunge iwe uri kuronga pane yakavanzika meseji kune vakakanganisa vatengi nezvazvo.
Kukadzi 1, 2016 na9: 10 PM
Ndakaona nyaya yacho ndichishandisa Google Webmasters uye ndichitarisa kumatambo edu ekukamba, Tolga. Ini handitende kuti vese vatengi vavo, ini ndinongofunga isu takasungirirwa pane mamwe anononoka maseva ane yakawanda mutoro pavari. Kana usiri kuona kuderera kwekuita, pamwe hapana chikonzero chekusiya. Flywheel haina kudhura pane edu akawanda maakaunzi sarudzo, kwete chokwadi asi iwe unogona chengetedza mashoma madhora.
Mukuru fan weFlywheel, Doug. Wanga uchishandisa kweinopfuura gore.
Kukadzi 2, 2016 na5: 10 PM
Handigoni kutenda kuti saiti yakadzikira zvakadii, uye kuti vakatadza kukupa mhinduro yakatwasuka. Ndinofara kunzwa zvinhu zviri kushanda zvakanaka naFlywheel. Isu tichangobva kuchinjisa kuitisa iyo Roundpeg saiti futi, uye kuve nenzvimbo yakagadzikana yeyedu saiti.
Mar 23, 2017 pa 1: 30 AM
Ini chaizvo ndinonetseka nekukanda makambani pasi pebhazi pane izvi zvinyorwa paruzhinji. Kambani yega yega ine vanhu vakanaka uye tariro yangu ndeyekuti ini ndakangovabata pamwedzi wakashata.
Mar 24, 2017 pa 2: 52 PM
Ndanga ndichifunga zvakanyanya nezve izvi, uye iwe unoziva chii? Warevesa. Ndokumbirawo ubvise chirevo changu. Zvisinei nematambudziko atinayo w / Flywheel, kunyangwe pazuva ravo rakaipisisa, vachiri kurova varidzi vakaita saHostGator, GoDaddy, nezvimwe.